मोवाइल र फोनको शुल्क अत्याधिक घट्दै, अब प्रतिमिनेट कति ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
मोवाइल र फोनको शुल्क अत्याधिक घट्दै, अब प्रतिमिनेट कति ?
काठमाडौं । नेपालमा प्रयोग भइरहेका मोवाइलको शुल्कमा निकै घटने भएको छ । आगमी चैत महिनादेखि प्रतिकल ५४ पैसा लिदै आएका सेवा प्रदायिक कम्पनीहरुले नेपाल सरकारको निर्देशिका जारी भएपछि प्रतिकल १० पैसा मात्र लिनेछन् ।
आजभोली एउटा कम्पनीको मोवाइलबाट अर्काे कम्पनीको मोवाइलमा कल गर्दा महँगो पर्ने गरेको छ । तर नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको अन्तरआबद्धता निर्देशिका २०७६ लागु भएपछि प्रति कल १० पैसा मात्र लाग्ने भएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको निर्देशिका आगमी चैत २० गतेदेखि लागु हुँदैछ । निर्देशिका जारी भएपछि मोवाइलको कल मुल्य निकै घटने दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।
इन्टरनेटको प्रयोगले ल्याण्डलाइन र मोवाइल प्रयोगमा कमी आउन थालेपछि प्राधिकरणले अन्तरआबद्धता निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो । इन्टरनेटबाट मानिसहरुले फ्रि कल गर्न थालेपछि मोवाइल र ल्याण्डकलमा कमी आएको छ ।
निर्देशिका जारी भएपछि ल्याण्डफोनबाट मोवाइलमा र एउटा कम्पनीको मोवाइलबाट अर्काे कम्पनीको मोवाइलमा कल गर्दा पनि कल शुल्क निकै कम लाग्ने भएको छ । अब एउटा सञ्जालको फिक्स्ड लाइनबाट अर्को सञ्जालको मोबाइलमा वा मोबाइलबाट मोबाइलमै कल गर्दा प्रतिमिनेट १० पैसा मात्रै लाग्नेछ । तर चैत २० सम्म भने प्रतिमिनेट ५४ पैसा नै रहने छ।
एनसेलबाट अन्य सेवाप्रदायकका सञ्जालमा फोन गर्दा हाल दुई रुपैयाँ ५४ पैसा शुल्क लागिरहेको छ । निर्देशिका जारी भएपछि यसको मुल्यमा पनि भारी कमी आउने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले विदेशबाट नेपालमा कल गर्दा निकै महँगो पर्ने गरेको थियो ।
विदेशबाट कल गर्दा पनि अन्तरआबद्धता शुल्क तोकिएको छ । निर्देशिका जारी भएपछि विदेशी कलमा पनि मुल्य कम हुनेछ । निर्देशिका अनुसार पहिलो वर्षका लागि विदेशबाट आउने कलको अधिकतम अन्तरआबद्धता दर आठ रुपैयाँ प्रतिमिनेट तोकिएको छ। आगामी आठ वर्षपछि घटाउँदै लगिने र प्रति मिनेट एक रुपैयाँ ८० पैसा मात्र हुनेछ। नेपाल सरकारको यसअघि कुनै नियम नबनाउँदा सेवाप्रदायिक कम्पनीहरुले आफुखुसी रकम लिने गरेका थिए ।
नेपाली चलचित्र “धनपति” अष्ट्रेलियामा प्रदर्शन हुने:
महेश्वर शर्मा सिड्नी अष्ट्रेलिया नेपाली चलचित्र " धनपति "अब अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा प्रदर्शन हुने भएको छ। […]
जेठ १९ को भित्री रहस्य : तीन युवतीको गोलचक्करमा थिए पूर्वयुवराज दीपेन्द्र
काठमाडौं । जेठ १९ को त्यो कालो रातले राजा वीरेन्द्रको वंश नाश गरायो भने नेपालमा राजसंस्थाको इतिहासकै अन्त्य […]
काठमाडौंबाट १५ किलो सुनसहित सात जना पक्राउ
भदौ १५, काठमाडौं । राजधानीको टोखाबाट बिहीबार दिउँसो १५ किलोग्राम सुनसहित केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो( […]
किशोरीलाई बलात्कार गरी भाग्ने युवक पक्राउ
असार १९ ।गौशाला, महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासमा आफ्नै छिमेकीको छोरीलाई बलात्कार गरी फरार रहेको आरोपमा ३२ […]
नदी र वन क्षेत्रबाट बालुवा, रोडा, ढुङ्गा झिक्ने कार्य बढ्यो
गाईघाट (उदयपुर), ७ जेठ - उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकास्थित बरुवा नदी तथा त्रियुगा नदीको मानवबस्ती क्षेत्र र […]